netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:MAKE UP
Sai Cosmetix Soft Touch Makeup Sponge
အနက်ရောင်ဘက်က contour color အညိုတွေကို blend လုပ်ဖို့
အဖြူရောင်လေးကတော့ highlight color တွေကို blend လုပ်ဖို့
ဒါဆိုရင် ဖြစ်နေကြ အရောင်တွေ ရောကုန်တဲ့ ပြဿနာ မကြုံရတော့ဘူးပေါ့
မျက်လုံးထောင့်လို precise ဖြစ်တဲ့နေရာတွေအတွက်လဲ အချွန်လေးပါတဲ့အတွက်အသုံးပြုရတဲ့နေရာမှာပိုမိုလွယ်ကူ အချိန်ကုန်သက်သာအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဖော့သားလေးလဲ ပိုအိအောင်လုပ်ထားပေးတယ်နော်
Karmart Micellar Cleansing Water Makeup Wipes
-တစ်​နေကုန်​ စိမ့်​ဝင်​​နေတဲ့ မိတ်​ကပ်​ အဆီ ၊ ​ချွေး ၊ချွေး​ပေါက်​ကြားထဲ ဝင်​​ရောက်​သွား​သော ​သေးငယ်​လွန်းတဲ့ ​ဖုန်​မှုန့်​ ၊ ​သဲမှုန့်​များ အမဲစက်၊ အညစ်​အ​ကြေးများအားလုံးကို အလျင်​မြန်​ဆုံးနဲ့ အသန့်​စင်​ဆုံးဖြစ်​​အောင်​ အချိန်​တိုအတွင်း ရှင်းလင်းဖယ်​ရှား​ပေးပါတယ်​
-Benzophenone Free and
-Coorant Free ​ဆို​တော့ မည်သည့်​ အသားအ​ရေမျိုးမဆို ဘယ်​​လောက်​ပဲ Sensitive ဖြစ်​တဲ့ အသားအ​ရေမျိုးမဆို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်​။
Karmart Milky White Cushion Cleanser
နို့အစစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးအားလုံးကို အလွှာလိုက်ဖယ်ရှားပေးတယ်။
Lactic Acid နဲ့ Milk Proteins ရဲ့ အစွမ်းတွေကြောင့် အချိန် အမြန်ဆုံးနဲ့ မျက်နှာကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပြီး တောက်ပလာစေတယ်။
နေလောင်ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အမဲစက်တွေကိုလဲ ရှင်းလင်းပစ်ပြီး နောက်ထပ် ထပ်မပေါ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။
တစ်ကြိမ် သုံးကြည့်ရုံနဲ့တင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးပြီး နူးညံ့ ချောမွေ့သွားစေတယ်။
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#08-Immortal Love)
-ကော့ညွှတ်နေအောင် ရွှန်းစိုနေမယ့်အပြင် Bulgarian Rose ကြောင့် ချိုမြိန်လွန်းတဲ့ အနံ့လေး
-တစ်နေ့တာလုံး မပျက်ပဲ တောက်ပနေစေမယ်
-ခြောက်သွေ့ကွဲအက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ရေဓါတ်ပြန်လည့်ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။
- ချောမွတ်ပြီး ကျန်းမာလှပနေမယ့် နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံအဖြစ် ဖန်တီပေးနိုင်ပါတယ်
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#04-Love At First Sight)
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#06-True Love)
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#02-Puppy Love)
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#01-Sweet Love)
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#05-Affectionate love)
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#07-Forever Love)
Baby Bright I Love You Color Lip Rose (#03-Hot Love)
Ma'suri Peach Mask Sheet
Ma’suri Snail Cotton Mask လေးကို ခရုလေးများမှ ရရှိသော အရေးအကြောင်းတင်းရင်းစေသည့် အဆီအနှစ်လေးများကိုအခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အသားအရည် ပျက်စီးခြင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မျက်နှာကို သေချာစွာသန့်စင်ပြီးနောက် Toner တစ်ခုခု လိမ်းပေးပါ။ Cotton Mask အား 15 မိနစ်ကပ်ထားပြီး ပြန်ခွာပေးပါ။ ပုံမှန်အသားအရည်ပိုင်ရှင်များ ရေပြန်ဆေးစရာမလိုပါ ~ မိတ်ကပ်လိမ်းမည်ဆုိုပါက အပေါ်မှ ထပ်လိမ်းလို့ရပါသည်။အဆီပြန်သောအသားအရည်ပိုင်ရှင်များ အဆီပြန်ခြင်းကိုထိန်းလိုပါက ရေဖြင့် ပြန်လည်ဆေးချနိုင်ပါသည်။
For Glows and moisturizing
Ma'suri Whitening Rice Sheet Mask
Karmart Sweet Aqual Tint (#05 Cherry)
-စွဲမက်ဖွယ်ရာ အသီးအနံ့လေးတွေနဲ့ Karmart ရဲ့ Sweet Aqual tint ​
Karmart Sweet Aqual Tint (#02 Rasberry)
Karmart Sweet Aqual Tint (#1 Strawberry)
Min: 650(Ks) Max: 115,000(Ks)
All Accessories Blusher Cable Cleansing Concealer Cushion Essence Eyebrow Eye-Care Eyelash Curle Eyeliner Eyeshadow Highlights Lip stick Lipbalm Make Up Mascara Mask Mirror Nose Up Powder TonerှSponge Face Care Body Care
All Catrice Karmart Kubiss Life Ma'suri Miss Beauty Molly Cosmetic Panasonic Remax Sai Cosmetix Soulmate Naturals YVES ROUCHER
All Accessories Beauty Electronic
Choose Series Clear
All First Collection Seventh Collection Second Collection Third Collection Fourth Collection Fifth Collection Sixth Collection Valentine Collection
All 21 23 #01Light Code:8858842041598 #02Ginger Code:8858842041604 #03Medium Code:8858842041611 #04DeepBrown Code:8858842041682 #05Dark Code:8858842041635 #1 Light Beige Code:8809212703097 #2 Natural Code:8809212703103 #3 Translucent Code:8809212703080 #4 Crystal Code:8809212703110 #21 Code:8809349140109 #23 Code:8809349140116 #21 Code:8809349140246 #23 Code:8809349140277 #21 Code:8809362062792 #23 Code:8809362062808 #21 Light Code:8809362062952 #23 Natural Code:8809362062969 #1 Light Code:8858842010037 #2 Green Code:8858842010044 #1 LIght Code:8858842010075 #2 Green Code:8858842010082 #23 Blue Orange Gold #01 Petit Code:8858842012970 #03 Sexy Code:8858842012994 Vit E Pink Code:8858842023549 Vit C Hot Code:8858842023556 # Green #2 Green Base Code:8858842025789 #3 Purple Code:8858842025796 #01 Code:8858842025840 #02 Code:8858842025857 #03 Code:8858842025864 #23 Natural Beige #01 Chewy Berry Code:8858842029541 #02 Sugar Pink C42029558ode:88588 #03 Lolli Peach Code:8858842029565 02 Dark Brown Jeju Poppy #21 True Bright #1 Dark Brown #2Red Brown #3 Brown #4 ASH Brown 01 Blonde Brown 02 Natural Brown 03 Red Brown #23 Natural Bright #25 Honey Bright #01 Aura Light #02 Golden Light #03 Pink Light Strawberry Cherry Grape #1 Light Brown #2 Ash Brown #3 Dark Brown #4 Grey Brown #1 Rosy Pink #2 Red Cherry #3 Orange Sherbets #4 Red Wine Medium (KB-6119) Dark (6126) Light 1 Medium2Dark3Honey Moon Kiss In The Dark Touch Me WEST WHITE STORY HOTEL PEARLAFORNIA AL CAPPUCCINO KEEP CALM AND LOVE THIS COLOUR LAVENDER MC QUEEN IVORY BEIGE NUDE BEIGE Rose & Woody VANILLA BEIGE WARM BEIGE MINT OF CHANGE INGLORIOUS MUSTARDS SUPER BLACK C'MON CHAMELEON! NO. 1 CANDYDATE THE BIG BLUE THEORY DONT LIE, LAC! 010 LIGHT VELVET 020 BEIGE VELVET 030 NATURAL VELVET 030 SAND VELVET YOUR FUCHSIA STARTS TODAY BRONZE ME UP, SCOTTY! A FLAMINGO IN SANTO DOMINGO ROSE PROPOSE GRAPEDATION NUDE NOT EXPIRED YET PLEASE TELL ROSY BLOODY VAMPIRE KISS BLACK BLACK WATERPROOF MEDIUM DARK RENUDE MY STYLE BLOSSOM 'N ROSES THE MUST-HAVE MATTS METALLUX SUNNY SYMPATHY TRANSPARENT MATT LIGHT INFUSION
All Gel Toner Cream
All 30ml 40ml 12g 60ml Juicy Watermelon 5ml(685239804216) Peppermint 5ml(685239804225) Coconut 5ml (685239804232) Bubblegum 5ml(685239804249) Apple Blast 5ml (685239804256) Mango 5ml(685239804263) Juicy Orange 5ml(685239804331) Soulmate Kiss 5ml(685239804348) Strawberrry Chessecake 5ml(685239804355) Juicy Watermelon 10ml(685239804270) Guava 10ml(685239804287) Coconut 10ml(685239804294) Bubblegum 10ml(685239804300) Apple Blast 10ml(685239804317) Soulmate Kiss 10ml(685239804324) 5ml 20g 30g 100ml 50g #04 Red Rose #05 Coral Red #03 Wine Orchid #02 Pink Moss #01 Sakura 7ml 15ml 6ml 0.5g #01 True Brown #02 Nude Brown #03 Rose Embroidery #04 Rose Bloom #05 Peach Me #06 Dusty Rose #07 Moss Rose #08 Aggie Maroon #09 Burgundy Red
All Remax Panasonic Sai Cosmetix Ma'suri Life Soulmate Catrice YVES ROCHER Molly Cosmetics Karmart Kubiss Miss Beauty